१८० पटक उठबस गराउँदा विद्यार्थी बेहोस ! - Nepali Taja Khabar
गरिबको घरमाः बत्ती र पंखा चलाउदाँ १ अर्ब २८ करोडको बिजुलीकाे बिल आएपछि,
मुख्य पृष्ठ /समाचार/१८० पटक उठबस गराउँदा विद्यार्थी बेहोस !
काठमाडौं। ललितपुर, प्युठानस्थित कालीदेवी मावि कक्षा ८ का विद्यार्थी दर्शन गौतम तीन दिन स्कुल आएन । मंगलबार आए तर, असहज मान्दै ।
कारण खोतल्दा थाहा भयो- गणित शिक्षक बज्रकिशोर शाहले गृहकार्य नगरेको भन्दै उनलाई लगातार १८० पटक उठबस गर्न लगाएछन् । १५० पल्टसम्म उठबस गरेका दर्शन त्यसपछि बेहोस भए ।
यो थाहा पाएलगत्तै प्रधानाध्यापक ठाकुर भलामा दौड्दै पुगे । कसैले दर्शनलाई हम्किन थाले, कसैले पानी छम्किए । झन्डै आधा घण्टापछि उनको होस फिर्यो ।
हाफ छुट्टीमा दर्शनलाई नजिकैको स्वास्थ्यचौकी लगियो । विद्यालयले घटना गुपचुप राख्न खोज्यो । अभिभावकलाई जानकारी नै गराएन ।
होमवर्क नगरेकामा सजाय पाएकाले दर्शनले घरमा पनि केही भन्ने आँट गरेनन् । बाबु कुटनाथले भोलिपल्ट छोराको साथीबाट यसबारे थाहा पाए ।, आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ ।
एक्ली आमाले पाइलट पढाएकी थिइन् सुजितलाई
जापानबाट आयो निकै दुखद खबर : ट्रिपरको ठक्करबाट जापानमा एक नेपाली युवतीको मृत्यु ,,,,,,,,,,,रिप लेखेर श्रद्धान्जली दिनुस मृत्य आत्यमाले शान्ति पाउनेछ)
शास्त्रले भन्छ – झुक्किएर पनि यी तीन समयमा नसुत्नु